Siyaasi Cabdi-daahir Yuusuf oo ka Digay in Gobolka Mudug la raaciyo M.gobollada Dhexe[DHAGAYSO] – Radio Daljir
Abriil 9, 2015 10:31 b 0
Khamis, Abriil 09, 2015 (Daljir) — Siyaasi Cabdi-daahir Yuusuf (Yeey) ayaa sheegay in lagu howlanyahay qorshe la xiriira in gobolka Mudug oo dhan la raaciyo gobollada dhexe. Waxaa uu sheegay arrintaan in ay ka shaqaynayaan beesha caalamka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya.
\_”Waa sharci-darro, maamul loo dhiso Mudug iyo Galgaduud, mana ahan arrin aan qaadan-karno, Mudug waa la yaqaan sida loo kala dago, haddii maamulka gobollada dhexe la rabo in la dhammaystirana waa in caqli lagu daraa, shacabkuna ma qaadan-karaan jajuub iyo khasab\_” Sidaasina waxaa yiri siyaasi Cabdidaahir Yuusuf Yey oo horay uga mid ahaa musharaxiintii Punltland u tartamayay 2014-ka.
Dhinca kale – Siyaasi C/daahir ayaa sheegay inuu jiro qorshe la doonayo in Puntland gobolladeeda lagu jarjaro, waxaa uu sheegay in gobollada Sool, Iyo Sanaag la doonayo in guud ahaanba laga jaro Puntland, uuna jiro qorshe loogu talagalay. Mudane C/daahir ayaa sheeegay inaan mar-naba la a-bali karin Puntlnad in la googooyo.
Ugu dambayn, Cabdi-daahir ayaa soo dhaweeyay shirwaynaha wadashiga iyo midnimada Puntland, kaasoo dhawaan uu ku dhawaaqay Madaxwayne C/wali Maxamed Cali \_’Gaas\_’